Trump Oo Waji Gabax Wayn Kala Kulmay Maxkamada Sarre Ee Maraykanka – Heemaal News Network
Maxkamadda ugu sarraysa waddanka Mareykanka ayaa gaashaanka u daruurtay iskuday aanan noociisa oo kale hore loo arag oo meesha loogaga saari rabay natiijooyinka doorashadii ka dhacday afar gobol oo aad loogu loolamay, dacwaddaas oo uu baritaarayay Madaxweyne Donald Trump.
Dacwadda ayaa waxaa todobaadkii tegay maxkamadda geeyay madaxda gobolka Texas, iyagoo doonayay in sharci-darro laga soo qaado natiijooyinka doorashooyinkii ka dhacay gobollada Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin.
Dacwadda ayaa waxaa taageerayay xeer ilaaliyayaasha 18 gobol oo Mareykanka ku yaal iyo 106 xubnood oo Jamhuuri ah oo ka tirsan Koongareeska.
Xukunkaas ayaa waxa uu ka dhigan yahay dhabarjab kale oo soo gaaray Mr Trump, kaas oo iyadoo uusan wax caddayn ah u hayn hore u soo jeediyay in natiijadii doorashadii madaxtinimada ee Nofeembar ay suuragal tahay in go’aankeeda lagu dhammeyn Maxkamadda ugu sarraysa dalka.
Maxkamadda ayaa bilowgii todobaadkii tegay diidday dacwad kale oo loogaga soo horjeeday guusha Mr Biden uu ka gaaray gobolka Pennsylvania, iyadoo gaashaanka ugu daruurtay hal jumlo oo ay xukunkeeda ku ridday.
Heemaal December 29, 2020 December 29, 2020
FBI Oo Aqoonsatay Qofkii Isku Qarxiyey Nashville